MELOTRIA AMA MINI-QAJAAR: SHURUUCDA BEERASHADA IYO DARYEELKA DHIRTA - BEER CAGAARAN
Sidee si habboon u daryeelaan melotriya geedka ama qajaar mini
Melotria - Warshadu waxay asal ahaan ka soo jeeddaa Afrika, waxay leedahay miro la cuni karo waxayna noqotaa mid caan ah oo caan ah oo ka dhexjirta dalxiisayaasha dalagyada dalxiiska.
Melotria mini-qajaar: sharaxaadda geedka
Melotria rough waxaa iska leh qoyska bocorka, oo leh miraha la cuni karo iyo khudaarta cagaaran. Warshadu waxay leedahay liana-sida afkeed ka dheer saddex mitir dheer, caleemuhu waxay u eg yihiin qajaar, saddex xagal muuqaal ah oo leh geeso fiiqan, laakiin aan lahayn qajaarka qajaar.
Melotria ayaa ubaxsan ubaxyo huruud ah, ubaxa qajaarka ah waa melexrias bisexual. Ubaxyada dumarku waxay si keli ah u koraan, halka ubaxyada labka ah ay u koraan inflorescences ee laba ubax.
Miraha isla waqti la mid ah qajaar (foom), iyo qaraha (midabka). Waxay u dhadhamiyaan sida qajaarka, maqaarka oo dhan. Ku celcelinta qolofka adag ee qajaar, melodriya si kastaba ha ahaatee ma aha mid aan qadarin. Root khudaarta Qajaar African ah oo dhadhamin, iyo qaabka la mid ah dabocase dheer.
Melotria waxay jeceshahay inay ku koraan goobaha cirifka, laakiin waxay si fudud u dulqaadanayaan hooska qayb ahaan. Ciidda dhirta waa mid dabacsan oo nafaqo leh. Qajaarkan waxaa lagu beeray xitaa weelka balakoonka ah, iyo sawirka ay ku beeran karaan dusha ama pergola, ka dibna, marka ay koraan muddo dheer afkoda, waxay qurxin karaan dusha. Tan iyo markii afkoda si dhakhso ah u koraan iyo tiro badan, dhirta waxaa loo isticmaali karaa ma aha oo kaliya dalagga beerta, laakiin sidoo kale sida dalagga dalxiis ah.
Ma taqaanaa? Qajaarka caadiga ah ee ka soo jeeda Himilooyinka, magaca magaca aan u adeegsanayna waxaa laga soo qaatay Giriigga "agouros", taas oo macneheedu yahay "macquul". Sida warshad beeraan ah, qajaar ayaa la ogsoon yahay in ka badan 6000 oo sano.
Xilliyada la soo saaro
Melotry koray geedo iyo abuurka, beeridda ee dhulka u furan. Habka labaad, miraha qajaar ah waxay u bislaadaan wax yar ka dib habka seedling. Inta badan, miraha waxaa lagu beeray ganaaxyada loogu talagalay ujeedooyin qurxinta.
Waa muhiim! Wixii beeritaanka ee bartamaha latitudes, kaliya hal nooc oo dhir ah ayaa ku habboon - Hummingbird fangs.
Wixii beereed by habka abuur, furrows a gacmeed waa la soo baxay, laba abuur lagu beeray labaatan santimitir kasta. Dabadeed furrow waxaa lagu daboolay dhulka, furrow waxaa lagu daboolay boorso, oo riixaya ciidda. Waa lagama maarmaan in la buuxiyo dhulka qoyan. Taariikhda beerashada - tobanka sano ee tobnaad ee Maajo.
Melotria qajaar mini ah waa geedo fiican. Horraantii Abriil, miraha waxaa lagu beeray sanduuqyada seedling buuxsamay substrate nafaqo loogu talagalay geedo. Seeds aan la rusheeyeen, daboolana daboolka. Wixii sanduuqa biqilka waxaa la dhigayaa kolla daaqad diiran.
Marka geedo ka sameeyaan saddex caleemo xoog leh, waxay ku quusiyaan weelal gaar ah, iyo waqti isku mid ah, ka dib qabashada, waxay quudiyaan markii ugu horeysay. Geedo waa la waraabiyaa si joogto ah, ma baqo.
Goobta furan, geedo yihiin transplanted qeybtii labaad ee May, marka caleemaha koraan ilaa shan sentimitir. Masaafada u dhexeysa duurka ayaa ku jirta 40 cm.
Qaadashada maqaarka cayayaanka ayaa u baahan waraabin joogto ah. Biyo u dooro biyo diirran oo diirran. U hubso inaad carrada ka miisaanto cawska oo aad u furto helitaanka ogsijiinta si nidaamka xididka geedka.
Feed ee muddada koritaanka, ubax iyo potash fruiting iyo xeryahooda fosfooraska. Bacriminta macdanta leh ee loogu talagalay dalagyada khudradda, waxay go'aamiyaan qiyaasta sida ku qoran tilmaamaha. Qajaar qajaar ee uumiga uma baahna caleemaha qoryaha, horeyba waa ay u duurka u daaqaa, waxayna dhirtaa miro.
Sida qiyaas ka hortag ah oo cudurka looga hortago, ku dhaq biyo saabuun leh bilowga xagaaga iyo dhammaadka.
Xiiso leh Masar hore, sawirkii qajaar ayaa loo adeegsan jiray cibaadada aaska: sawirkiisa waxaa lagu dabaqay nashqada samafalka, miraha waxaa lagu tegey xabaalaha pharaohs. Giriiggii hore, qajaarku waxa uu yeeshay dabeecad kala duwan: waxa loo isticmaalay daawo ku saabsan talooyinka Dioscoride iyo Theophrastus, saynisyahannada wakhtigaas.
Melotria ee qajaarka yar oo si dhaqso ah u dhaqso, miraha ugu horeeya waxay u muuqdaan laba ilaa seddex isbuuc ka dib marka la beero. Maadaama miro ay u muuqdaan in ka baxsan yihiin, waa la goostay marka ay gaaraan 2-3 cm dhererka. Ilaa shan kiilogaraam oo miraha ah ayaa laga goostay hal baadiyaha.
Ka dib markii la ururiyey oo dhan qajaarka, goosashada dalagyada xididka ee qajaarka qaraha ee melotriya bilaabmaa. Si ay u dhadhamaan, waxay u eg yihiin sheyga ama radishes.
Dalagyada beeraha iyo hilibka miro ayaa ku habboon kaydinta muddada dheer. Dhiroonka waxaa badanaa la qabadsiiyaa oo la cusbeynayaa, khudaarta cagaaran waxaa badanaa la cunaa isla markiiba ka dib goosashada.
Qalabka waxtarka leh ee sawirada
Melotria waa dukaanka fiyuusiga, waa wax aan loo baahneyn maalmaha soonka iyo nafaqada cuntada. Isticmaalka joogtada ah ee melothria mini-qajaar ayaa xoojiya nidaamka difaaca iyo derbiyada vascular.
Digniin! Laguma talin karo in la isticmaalo qajaarka Afrikanka loogu talagalay cudurrada booga iyo boogaha.
Iyadoo qayb ka ah qajaar magnesium, birta, potassium, kalsiyum, fosfooraska, sodium, marka lagu daro: fiitamiin B9 iyo C. Vitamin B9 ayaa lagu muujiyaa hooyooyinka uurka leh ee sameynta maskaxda ee kuurjiifka. Isticmaalka ganaaxyada waxay kicisaa dhaqdhaqaaqa wadnaha, dib u soo celinta cadaadiska, waxay yareysaa xaddiga kolestaroolka dhiigga.
Khudradani waa mid faa'iido leh haddii aad rabto inaad hoos u dhigto oo aad caadi u yeelato miisaankaaga, sababtoo ah kalooriga hooseeya (15 kcal) wuxuu keeni karaa dareen ficil. Daraasado ka kooban halbeegga ayaa muujiyay in uu leeyahay waxyeello soo noqnoqonaya, dib-u-samaynta iyo dabeecada ka-hor-istaaga jirka.
Haddii aad rabto inaad kala soocdo cuntadaada khudradda waxtar leh oo qurxinaysa sawirka, geli melotraria. Beeraheeda iyo koritaankeedaba ma dhicin wax dhibaato ah. Warshad waa mid aan qabyo ahayn, midho leh, faa'iido leh iyo qurxin.